Pabrika fanaovana amboradara sy tenona - Mpanamboatra sy mpamatsy tenona mpanamboatra lamba any China
Vokatra lamba vita amin'ny tantara lava, vita amin'ny milina izao. Ny orinasanay miorina amin'ny 1984, manana traikefa betsaka amin'ny vokatra amboradara sy tenona izahay. Ny mpiasanay iray dia afaka miasa amin'ny masinina maro. Ary ny milina iray dia afaka mahazo vokatra 20-30pcs mitovy amin'ny fotoana iray. Ataonay ho mahomby be ny famokarana vokatra vita amin'ny lamba. Avy eo ny mpanjifa dia afaka mahazo amin'ny vidiny mora. Afaka manome vokatra amboradara sy tenona isika. Ny vokatra vita amboradara sy tenona dia malaza ho ampahany amin'ny haingon-trano ho an'ny akanjo / satroka / kitapo. Indrindra fa ambany MOQ ary ny fotoana famokarana fohy ho an'ny famolavolana namboarina. Betsaka ny mpanjifa no misafidy ireo hanao ny sary famantarana / famolavolana azy avy eo miraikitra amin'ireo vokatra lehibe. Ary ity karazana logo ity dia marin-toerana kokoa, ary rehefa imbetsaka dia manasa ihany fa mbola mitazona hatrany am-boalohany. Misy sary 3D ny sary famantarana ny peta-kofehy. Ary ho an'ny volavola manokana, dia afaka mamorona mazava tsara ny endriny. Ohatra, ny biby sasany misy volo. Ny kofehy dia mety hahatonga ny volo ho tena misy ho an'ny endrika ivelany sy ny fikasihan-tanana. fa ho an'ny sary famantarana kely sy litera kely voatenona dia afaka mahazo antsipiriany tsara kokoa. Ary afaka manao tenona miaraka amina sary sokitra amin'ny vokatra iray isika. Ary manome soso-kevitra tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika foana izahay. Tongasoa eto alefaso aminay ny volavolanao!
Bara laharana / Laharana miaramila / Laharana miaramila / ...
Taratasy amboradara sy tenona